VMware Exams ဖြေဆိုသူများအတွက် အထူးသတင်းကောင်း
June လအတွင်း VMware (VCP) Exams ဖြေဆိုသူများကို Hoodie လှလှလေးရမှာဖြစ်ပါတယ် June လ (၁) လထဲသာ ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အမြန်ဆုံး စာရင်းပေးဖို့ လိုမယ်နော် VMware (VCP) Exams ကို ...
Artificial Intelligence (AI) နည်းပညာကို အခြေခံထားသော English Learning Mobile Application ဖြင့် အချိန်/နေရာ မရွေး English ဘာသာစကားကို Native Speaker တစ်ယောက်၏ အသံထွက်အတိုင်း နားထောင်လေ့ကျင့်ပြီး တစ်ရက်ကို ...
KMD Institute ၏ Online မှ လေ့လာနိုင်သော SQA Advanced Diploma in Computing (HND) ကို တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးချင်ပါတယ်
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားတွင် ပြန့်နှံ့နေသော COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် သား၊သမီးများ၏ ပညာရေးကို စိုးရိမ်ပူပန်နေသော မိဘများအတွက် အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြသော KMD Institute ၏ Online မှ လေ့လာနိုင်သော SQA Advanced Diploma in Computing ...
Application Courses Online Class များဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားပါမည်။
အားလုံး အားလုံးအတွက် KMD Institute မှ ယခုကာလအတွင်း Stay Home လုပ်နေသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ Work from Home လုပ်နေသော ဝန်ထမ်းများ၊ ကွန်ပျူတာပညာရပ်ကို လေ့လာလိုသူများအတွက် အပြင်ထွက်စရာမလိုဘဲ နေအိမ်မှနေ၍ Online ...